Mauro Icardi Oo Shaki Galiyay Mustaqbalkiisa Kooxda Inter Milan & Kooxaha Doonaya Adeegiisa – Gool FM
(Inter Milan) 26 Abriil 2018 Waxaa wali la shaki galinayaa mustaqbalka Mauro Icardi, maadaama ay jiraan warar xoogan ee ku aadan inuu ka dhaqaaqayo garoonka San Siro dhamaadka xili ciyaareedkan.
Dhaliyaha xulka qaranka Argantina ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ka sameenaya xili ciyaareedkan kooxdiisa Inter Milan, laakiin wuxuu doonayaa in xili ciyaareedka soo aadan uu koow weyn kala soo muuqdo tartanka UEFA Champions League, isagoo dalabyo kala duwan ka helaya kooxaha Real Madrid iyo PSG.
Icardi ayaa xili ciyaareedkan booska labaad kaga jira dhanka kala sareynta gool dhalinta horyaalka dalka talyaaniga, kadib markii uu soo dhaliyay 26 gool, halka kooxda Lazio Immobile oo hagaaminaya xili ciyaareedkan gool dhalinta uu 3 gool ka sareeyo.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa daboolka ka qaaday in Mauro Icardi uu ka tagayo Inter Milan, waxaana sidoo kale saxiixiisa raacda ugu jira kooxaha Chelsea Iyo Manchester United.
Carvajal Oo La Shaaciyay Mudada Uu Maqnaan Doono, Miyuu Seegi Doonaa Kulanka Lugta Labaad Ee Bayern Munich?
Cristiano Ronaldo Oo Ka Dalbaday Real Madrid Inay Sameeyaan Saxiixyada Ciyaaryahanadan